Sunday September 03, 2017 - 02:49:05 in Maqaallo by Super Admin
Ciid wanaagsan mudane wasiir maxamed jaamac abgaal cafimaad iyo dambi dhaaf ayaan illaahay idiin ka rajeynayaa adiga iyo dhamaan akhristayaash mudan ee meel ay joogaanba wanaag baan u haa sida ay ugu xidhan yihiin qormooyin aan uga soo miiro kaskaygiyo kasheyda ee ku saleysan ( aragti iyo fikrad cabirka xorta ah sida aan qabo ); wasiirkii hore ee wasaarada boosaha iyo isgaadhsiinta Mr.Abgaal waxa uu ka mid yahay shakhsiyaad ka aan u han-weynaha kalsoonida naftiisa uu ku qabo iyo dhiiranaantiisa; ha yeeshee marka xigta ( dhaliili dhaban bay ku taalaaye ) halkan ka bogo dhaliilaha uu qof iyo qudh intaba u leeyahay :
1. waa masuul sumad u leh astaanta 4 guul darado sida aynu darisnay ; sababtu tahay 2003 doorashadii ugu horeysay ee daahir rayaale lagu doortay; Mr.Abgaal sidii uu u ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga udub markii doorashadu kaabiga timi ayuu markaliya xisbiga kulmiye ka hillaacay oo uu galey !! waxa xigtay in xisbigii kulmiye dhacay sabankaas!!; guul daradii labaad : isaga oo sidii kulmiye u ah ay u orday musharax xubin x.kulmie gobolka Awdal uga mid noqta golaha wakiilada balse uu dhacay illaha amarkii ; guul daradii saddexaad : waxa lasoo gaadhay 2008 Burco xiligii X.kulmiye mar labaad xulanaayey musharaxiintiisa madaxtooyada Mr Abgaal waxa uu hogaan qabad u ahaa oo uu watay musharax mujaahid c/raxman Aw cali faarax illahay amarkii waa tii laga badiyey mujaahidka ina aw cali !! ; guul daradii afaraad : doorashadii taas xigtay ee siilaanyo iyo saylici lagu doortay markii xilliga doorashadu soo dhawaatay ayuu markale kulmiye ka baxay oo uu xisbigii udub galey!! waxa xigtay in xisbigii udub na waayey doorashadii oo uu dhacay !!
Dhamaan guul darooyinkani waxa ay qayb ka yihiin cibaarooyinka uu hoodada iyo nasiib xumada uu marwalba ula soo qayuuro had ba cida uu raaco xilliada kala guurka ah ee doorashooyin fool leeyihiin.
2. Mudane M.Abgaal Borama dhul dawladeed ayuu dhacay xilligii daahir rayaale : masuulkani degmada Borama waxa uu ku leeyaha guri weyn oo waafiya; kaasi oo u dhaw saylada xoolaha ee borama , dhulka uu gurigaasi ka dhistay waxa qud iyo maandho iska la haa wasaarada xanaanada xoolaha; dhulkaasi waxa ku ooli jiray dhismaha lasoo dul dhoobo ama dejiyo marka gaadiidka xoolaha lagu raraayo oo aan agmari jiray waligayba marka aan subaxdii dugsiga ku sii socdo !! dhulkii weynaa ee u banaanaan jiray wasaara xoolaadu maanta waxa ka dhisan gurigiisa weyn ee baaxada leh !! ma masuulka noocaas ah ayaa ka sheekaynaya in kulmiye gobolka awdal dhulkii hantida guud wada iibiyey!! aduunyada hadaad dhiman weydo maxaad wax walba oo kaa yaabiya arkaysaa sida abgaal oo kale.
3. tabashada reer Awdal ayuu ka sheekeeyaa si af xafid ah; isaga oo aan dan iyo muraad toona kalahayn cidna dantiisa shakhsiga ah mooyee!! waxa uu soo ahaa wasiir wasaaradeed waligii mashaqaaleyn qof ( samaroon ah ama ciise ah; dareen iyo damiir daridiisa markaasuu maalinta uu bilaa camal noqdo ku meeraystaa tabashada reer awdal baa sidan iyo sidan ah…………… yaab weynaa………. waxa aan goob joog u ahaa wiil uu adeer u dhaw u yahay oo aanu saaxiib naha ayaa kasoo qalin jabiyey jamacad maqala itoobiya ku taal ; 2 bilood ayuu daba socday ugu dambeyntiina uu ka naf iyo caal waayey wasiirka markuu ahaa adeerkii abgaal si uu bal wasaarad kale oo waxa uu soo bartay khusaysay ugu shaqo geeyo , qof ahaan 3-4 jeer ayaanu toddobaadkii wiilka is arki jirnay ; wiilkii oo qofka ku soo hadal qaada adeerkii karaahiyeysanaya nacayb dartii ayuu rabi faraj u furay oo uu shaqo hellay.
Horta waa aaye laawahaasi wiilkuu adeerka u ahaaba wax tari waayey ninka ka sheekaynaya tabashada reer awdal samaroon iyo ciise !! dantiisa oo kaliya in uu raacdo waxa daliil u ah sifihii iyo sababtii xilka lagaga qaaday.
Mudane wasiir tabashada reer awdal ee dhanka haya’adaha dawliga ah maaha mid dawlada hargaisa joogtaa wax ka tari karto; sababta oo ah nooc uu doonaba ha ahaadee xafiis kasta oo dawlada ka mid ah uu ciir ciirayaa oo dad baa ka buuxa ka soo jeeda 97% beesha tabashada loo tirinayo ah, iyaguna khalad maleh sababtuna tahay isriix riixa iyo wax kala boobka u dheexeeya weeyi murtidu .
Xaqiiqdu waxa ay tahay iyo sida aan qof ahaan aaminsanahay ( reer awdal culeyska ka fudeydiyaan dawlada iyo reer hargaisaba; sababtuna tahay sida kaliya ee tabashada reer awdal haakah iyo haqab beel ku noqon kartaayi reer awdal waxa laga rabaa tolo mideysan iyo fadhi ay fadhigaas tabashada ku gadaaman uga noqdaan si ay masiirkooda u suureyn karaan, waa soo jeedin xoog leh oo ay soo jeediyaan dastuurka oo la furo , kaabis iyo wax kabadal lagu sameeyo loo qaabeynayo in AWDAL noqoto dawlad goboleed somaliland ah oo ay wada leeyihiin Samaroon , Ciise iyo isaaq ; halkaasi ayey dhamaan tabashooyinka iyo warkood lagaga bogsan karayaa; waxa idinka xigtan soo jeedintiina oo xoogan oo mid ah ama dadka inta u badan ah , AWDAL dawlad goboleed weynoqon kartaa si buuxda isku bixisa oo waliba dhaqaale xoogle ku soo kordhisa somaliland inteeda kale ; waxa loo baahanyahay in maamulka la daadejiyo).
Mudane abgaal waxa aan leeyahay ka fadhiiso siyaasada dalka; siyaasada reer awdal waxa ay u baahantahay in dhiig cusub lagu shubo; noqo adigu tababare sida ciyaar tooguba ugu dambeeyaan tababarayaal !!.